म अ।वि।वा।हित महिला हुँ । म औं।लाले नै से।क्स। गर्छु, पछि केहि असर गर्ला किनाइ? – Sidha Post 24
सेक्स अर्थात् यौनसम्पर्क गर्नु भन्नाले धेरैजसोले योनि-लिङ्ग मैथुनलाई सम्झन्छन् । यस्तो यौनसम्पर्क योनि-लिङ्ग मात्र नभै मुख-मैथुन वा गुदा-मैथुन पनि हुन सक्छ । योनिमा औंला पसाउनु भनेको पक्कै नै यौन क्रियाकलाप हो ।
यसलाई यौनसम्पर्ककै रूपमा परिभाषित गर्न भने नमिल्ला । बरु यसलाई हस्तमैथुन भन्न सकिन्छ । तपाईंलाई थाहै होला, आफूले आफ्नै यौनाङ्ग वा यौन संवेदनशील अङ्ग चलाएर, घर्षण गरेर वा दबाब दिएर आनन्द प्राप्त गर्ने क्रियाकलाप नै हस्तमैथुन हो ।
महिलाले विभिन्न किसिमले हस्तमैथुन गर्छन् । भगांकुर चलाउनु वा घर्षण गर्नु हस्तमैथुनको एउटा प्रचलित विधि हो । भगांकुर करिब ९० प्रतिशत महिलामा यौन संवेदनशीलताको केन्द्रका रूपमा रहेको हुन्छ ।
आफूलाई सजिलो लाग्ने वा मन पर्ने कुरा वा तरिकाले यसलाई चलाउन सकिन्छ वा यसलाई कुनै वस्तुमाथि थिच्ने जस्ता अनेक उपाय गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी अर्को प्रमुख उपाय योनिमा औंला वा लिङ्ग आकारको वस्तु वा अन्य केही पसाउनु हो । यसो गर्दा योनिमा पर्याप्त मात्रामा रस आइसकेको हुनुपर्छ र यौन उत्तेजना हुँदा यो स्वभाविक रूपमै हुन्छ ।
त्यस्तो नभएको स्थितिमा अन्य कुनै चिप्लो पदार्थ प्रयोग गर्न बिर्सनु हुँदैन । यस्तो पसाउने कुरा सफा भएको कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ । औंला पसाउँदा योनिमा आफूलाई बढी आनन्द आउने स्थान खोज्न सकिन्छ ।
भगांकुर होस वा योनि, हस्तमैथुनमा औंलाको प्रयोग नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । औंला बहुउपयोगी हुने भएकाले नै चाहेअनुरूप दबाब, गति, एवं शैलीमा गर्न सकिन्छ, जसले आनन्द वृद्धि गर्छ । त्यसबाहेक महिलाका अन्य अङ्गहरूको स्पर्श, मर्दन वा सुमसुम्याई यौन आनन्द पाउने कुरामा सहायक नै हुन्छन्,
तर अचेल यसरी यौन आनन्द लिने क्रममा महिलाहरूले यौन प्रसाधन वा वस्तुहरू पनि प्रयोग गर्न सक्छन् । कतिपयले पुरुषको लिङ्ग आकारको कृत्रिम वा प्राकृतिक वस्तु पनि प्रयोग गर्छन् । अंग्रेजीमा (भाइबे्रटर) भनिने यौन प्रसाधन विभिन्न किसिमका आकार-प्रकारमा उपलब्ध छन् ।
के म भर्जिन रहन्छु ?
विशेष गरेर महिलाको कौमार्य विकसित मानव सभ्यताको मात्र नभई पहिलेदेखि नै मानव यौनिकताको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष रहँदै आएको पाइन्छ । यसमा कसको नियन्त्रण हुने भन्ने एक किसिमको द्वन्द्व जहिले पनि छ ।
विवाहमा कुमार केटालाई कन्या (केटी) खोज्ने चलन भए पनि विशेष गरेर कुमारी केटीको सन्दर्भमा कौमार्य भङ्ग भए नभएको कुराले निकै महत्त्व राखेको पाइन्छ । त्यस्तो स्थितिका कन्या कुमारीलाई अक्षत योनि भनिन्छ र त्यसका लागि अंग्रेजी शब्द virgin (भर्जिन) प्रयोग गरिन्छ ।
कुनै पनि व्यक्तिसँग यौनसम्पर्क राख्नु नै कौमार्य भङ्ग हुनु हो । अहिले कस्तो किसिमको यौन क्रियाकलापलाई यौनसम्पर्क मान्ने अनि कस्तोलाई नमान्ने भन्ने प्रश्न पनि छ । कुमारीत्व वा कुमारत्व शारीरिक कुरा मात्र होइन, भावनात्मक पनि हो ।
लिङ्ग प्रवेश नभै यौन उत्तेजक रूपमा यौनाङ्गमा औंलाको भरपुर प्रयोग गरेर यौन क्रियाकलापमा संलग्न भएको कुरालाई के भन्ने ? जस्ता प्रश्नको उत्तर पनि बाँकी नै रहन्छ ।
जैविक रूपमा यौनसम्पर्कको अनुभवहीनता नै कौमार्य भङ्ग नहुनु अर्थात् कुमार वा कुमारी हुनु हो । धेरै जसो स्थितिमा कौमार्य (virginity) भङ्ग हुने कुरा किशोरी वा युवतीको वा भनौं महिलाको सन्दर्भमा गरिन्छ । यौनसम्पर्क नराखेको स्थितिमा व्यक्तिको कौमार्य भङ्ग भएको मानिँदैन । साँचो अर्थमा हस्तमैथुनलाई यौनसम्पर्क भन्न पनि मिल्दैन ।
कौमार्य भए नभएको कसरी जाँच्ने ?
पहिले – पहिले महिलाको योनिच्छद च्यातिएको वा नच्यातिएको आधारमा कुमारीत्वको आँकलन गरिन्थ्यो । प्रत्यक्ष रूपमा यो च्यातिएको थाहा पाउन विभिन्न उपाय गरिन्थ्यो । विवाहपछि नवविवाहितासँग पहिलो यौन सम्पर्कमा रगत आउनुलाई नै योनिच्छद च्यातिएको प्रमाणका रूपमा लिइन्थ्यो अर्थात् अक्षत- योनि भएको प्रमाण । यसका साथै पीडालाई पनि विशेष चासोका साथ अवलोकन गरिन्थ्यो । रगत स्पष्ट रूपमा देखियोस् भनेर विवाहपछिको प्रथम रात बिछ्यौनामा सेतो तन्ना बिछयाइन्थ्यो ।
योनिच्छद योनिद्वारनजिक रहेको पातलो छालाको झिल्ली हो । अंग्रेजीमा यसलाई जymभल भनिन्छ । कुनै – कुनै युवतीको योनिच्छद जन्मजात नै नहुन सक्छ वा यसको राम्रोसँग विकास नभएको हुनसक्छ ।
प्रथम यौनसम्पर्क हुनुभन्दा पहिले नै कतिपय युवतीमा शारीरिक क्रियाकलापका दौरान योनिच्छद च्यातिन सक्छ । भनिन्छ, यो खेलकुद, घोड्चढी, साइक्लिङ वा अन्य व्यायामका कारण पनि च्यातिन सक्छ । त्यसैगरी महिनावारीको रगत सोस्न प्याडको सट्टा प्रयोग गरिने त्amउयल टयाम्पोन) पनि योनिच्छद च्यातिने कारण हुन सक्छ ।
अहिले विवाहको उमेर पछिल्तिर धकेलिएको छ, त्यसैले तपाईंले जस्तै कैयौं किशोरी वा युवतीहरूले हस्तमैथुनको माध्यमबाट आफ्नो यौनेच्छा पूरा गरेका हुन्छन् र कतिपयले औंलाका साथै अन्य वस्तु पनि प्रयोग प्रयोग गरेका हुन सक्छन् ।
कतिपय युवतीले हस्तमैथुन गर्ने क्रममा आफ्नो योनिच्छद च्यात्न सक्छन् । त्यसैले कुनै युवती पूर्ण रूपमा कुमारी भए पनि अर्थात् यौनसम्पर्क नै नगरेको भए पनि पहिलो यौनसम्पर्कका बेलामा पटक्कै रगत नआउन वा कुनै पीडा नहुन सक्छ ।
अर्कातिर, केही युवतीको योनिच्छद निकै लचिलो हुनसक्छ । अति नै लचिला योनिच्छद यौनसम्पर्क राखिसके पनि नच्यातिन सक्छ । त्यसैले योनिच्छद हुँदैमा यौन क्रियाकलापमा संलग्न नरहेको प्रमाणित गर्न सकिँदैन ।
केही मुलुकमा अचेल च्यातिसकिएको योनिच्छद शल्यक्रिया गरेर पुन: बनाइएको हाइमेनोराफी) पनि पाइन्छ, जसले योनिच्छदलाई कुमारीत्वको आधार मान्ने कुरालाई थप जटिल र अमान्य बनाइदिएको छ
योनिच्छद वा प्रथम यौनसम्पर्कमा रगत आउनुलाई कुमारत्व वा कुमारीत्वको आधार बनाइनु वैज्ञानिक छैन । त्यसैले अनावश्यक रूपमा चिन्ता गर्नु मनासिव होइन ।
हुन त तपाईं टुक्रुक्क बसेर ऐनाको मद्दतले भगोष्ठलाई फटयाएर योनिद्वारमा योनिच्छद भए- नभएको वा त्यसको स्वरूप हेर्न सक्नुहुन्छ, तर माथि उल्लेख गरिएका कुरा अध्ययन गरिसकेपछि यो विषयमा अनावश्यक चिन्ता लिनु मनासिव छैन भन्ने कुरा पक्कै बुझिसक्नुभयो होला ।
५ मिनेटको ३ लाख चार्ज गर्छु – सक्नेले सम्पर्क गर्नुस